Putin oo booqasho ku jooga Masar - Wargane News
Home Somali News Putin oo booqasho ku jooga Masar
Putin oo booqasho ku jooga Masar
Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa Isniintii shalay booqasho ku tagay magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar.
Putin ayaa soo dhaweyn diiran kala kulmay dhigiisa Masar Cabdifatax Al Sisi, booqashada hogaamiyaha Ruushka oo ah tii ugu horeysay muddo 10 sano ah oo uu ku tago dalka Masar ayaa qaadan doonta laba maalmood.
Booqashada Putin ee Masar ayaa qeyb ka ah safarada uu hogaamiyaha Ruushka doonayo inuu ku tago dalal kamid ah dunnida sadexaad si uu u xoojiyo xiriirka Ruushka iyo dalalka soo koraya.
Dowlada Ruushka ayaa dhawaan qandaraas dhanka hubka ah la gashay xukuumada militariga Masar, xili dalka Ruushka uu cadaadis iyo cunaqabateyn uga imaaneyso dalalka reer Galbeedka.
Ruushka ayaa doonaya inuu xoojiyo ganacsiga iyo iskaashiga uu laleeyahay dalalka Afrika iyo Aasiya si uu uga soo kabto hoos u dhaca ku yimid dhaqaalihiisa tan iyo intii ay bilaabatay xiisada ka taagan dalka Ukraine.
Somaliland: Cali Khaliif oo Buuhoodle kaga dhawaaqay Hindise ay Hal Maamul ku dhisanayaan Khaatumo & Koox la baxday Maakhir State iyo Wejiga Cusub ee Siyaasadda
Somaliland: “Xeerka Lagu Soo Dooranaayo Baarlamaanka Waxay Ahayd Inuu Guddoomiye Cirro Ka Shaqeeyo” Mujaahid Cali Guray
Guban view: Muse Bihi is the right choice for President
Somaliland: Golaha Guurtida Somaliland Oo Maanta La Filayo In Ay Muddo Kordhin U Sameeyaan Xukuumadda Madaxwayne Siilaanyo
Deg Deg: Diyaarada Qatar Airwey Oo Isticmaashay Hawda Somaliland Iyo Go,ankii Xukuumadda Oo Waxaba Kama Jiran
Somaliland: Xildhibaan Dhakool Oo Ka Waramay Qaabkii Walaalkii Dabley Hubaysani Ugu Dileen Badhtamaha Laascaanood